HomeWararka CiyaarahaCristiano Ronaldo oo ka Maqnaan Doonaa kulanka Manchester United iyo Crystal Palace.
Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo waramayaa inuu ka maqnaan doono Manchester United kulanka ugu dambeeya ee ololaha 2021-22 ee Premier League ee ay la ciyaarayaan Crystal Palace galabnimada Axadda.
Red Devils waxay u baahan tahay inay garaacdo Eagles si ay u xaqiijiso kaalinta lixaad ee kala sarreynta , taasoo u sahlaysa inay u soo baxdo Europa League xilli ciyaareedka soo socda iyagoo ka sarreeya West Ham United.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda Ralf Rangnick ayaa la sheegay inay waayi doonto adeega gooldhaliyahooda hogaaminaya, iyadoo Ronaldo uu qarka u saaran yahay inuu seego tartanka Selhurst Park.
Sida laga soo xigtay The Athletic , arin ku saabsan 37-jirka miskaha ee jilicsan ayaa diiday inuu ciyaaro kulanka Patrick Vieira .
Ronaldo ayaa seegay kulamadii Aston Villa iyo Manchester City horaantii xilli ciyaareedkan isaga oo dhibaato taas la mid ah qaba, waxaana hadda la filayaa in uu seego kulanka ugu dambeeya ee xilli ciyaareedka 2021-22.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Portugal ayaa si cajiib ah ugu soo laabtay Old Trafford, isagoo shabaqa soo taabtay 24 jeer 38 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan, marka lagu daro seddex gool caawineed.
Ronaldo ayaa dhaliyay 18 gool oo Premier League ah, halka uu lix gool ka dhaliyay todobo kulan oo Champions League ah, iyadoo kooxda Rangnick ay ku reebtay Atletico Madrid 16-kii ugu dambeeyay.
Waxaa jiray hadal heyn badan oo ku saabsan mustaqbalka weeraryahanka toddobaadyadii la soo dhaafay, iyadoo la sheegayo inuu ka tagi karo Man United xagaagan, hal sano ka hor dhamaadka qandaraaskiisa.
Si kastaba ha ahaatee, Ronaldo ayaa lagu wadaa inuu sii joogo Old Trafford si uu uga hoos shaqeeyo tababaraha cusub ee Erik ten Hag , kaasoo shaaca ka qaaday inuu rajaynayo inuu maamulo da’yarkii hore ee Sporting Lisbon.
“Waa guuleyste run ah waana ciyaaryahan cajiib ah, ma sugi karo inaan la shaqeeyo isaga,” ayuu Ten Hag ku yiri wareysigiisii ​​ugu dambeeyay ee Ajax.
Dhanka kale, Ronaldo ayaa ku amaanay macalinka imaan doona wareysi uu dhawaan siiyay website-ka rasmiga ah ee Man United, isagoo u muuqday inuu xaqiijiyay inuu sii joogi doono kooxda inkastoo aysan ku guuleysan Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
“Waan ogahay inuu shaqo cajiib ah ka soo qabtay Ajax, iyo inuu yahay tababare khibrad leh, laakiin waa inaan siinaa waqti” ayuu yiri Ronaldo. “Arrimuhu waa inay bedelaan sida uu rabo.
“Haddii uu si fiican u qabto, dhammaan Manchester United waxay noqon doonaan kuwo guulo leh, sidaas darteed waxaan u rajeynayaa wanaag. Dhammaanteen waan ku faraxsanahay oo ku faraxsanahay imaatinkiisa, kaliya maaha ciyaaryahan ahaan, laakiin taageere ahaan sidoo kale, waa inaan aaminsanahay sanadka soo socda. waxaan ku guuleysan karnaa koobab.”